USA Trip | GO & GO Travels
တန်မှတန်တဲ့ GO & GO Travels ၏ အမေရိကား (၁၀) ရက်ခရီးစဉ်
ဈေးနှုန်း - လူကြီးတစ်ဦးလျှင် ( 2950 USD )
စုရပ်ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် TourLeaderမှစောင့်ကြိုပြီး Hong Kong(CX) or Dubai (EK)လေဆိပ်မှ တစ်ဆင့် နယူးယောက်မြို့ ရှိ ဂျွန်အပ်ဖ်ကနေဒီ (JohnFKennedy) လေဆိပ်သို့ထွက်ခွာပါမည်။ ဧည်သည်တော်ကြီးများအား လေယာဉ်မယ်များမှ ညစာ၊ နံနက်စာ၊ နေ့ လည်စာ များဖြင့် ဧည်ခံကျွေးမွေးသွားပါမည်။ Overnight on flight.
Day-(2)-နယူးယောက်မြို့ သို့ ရောက်သည့်နေ နှင့် စတင်လည်ပတ်မည့်နေ့ ( ညနေစာ ) John F Kennedy လေဆိပ်တွင် American Tour Leader မု တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ပြီးနောက် Manhattan မှာရှိတဲ့ ဟိုတယ်သို့ ပို့ဆောင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိဲပြီး လေဆိပ်တွင် ခရီးဆောင်အိတ်များ ရွေးချယ်ပြီး သည်နင့် ဧည့်လမ်းညွှန်မှ လာရောက်ကြိုဆိုပြီး ဟိုတယ်သို့ Check in ၀င်ရန် ပို့ဆောင်ပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ထို့နောက် New York မြို့တလျှောက် စတင်လည်ပတ်ပြီး အမေရိကန် လူမျိုးများရဲ့ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းမူ ဖော်ရွှေတဲ့ ဆက်ဆံတတ်မူနဲ့ အတူ တချိန်တည်းမှာဘဲ Long Arm Law ကြီးကို ကျင့်သုံးတဲ့ World Police ကြီးအဖြစ် လူသိ များကြတဲ့ အမေရိကန်တို့ ရဲ့ Human Right ကို အလေးထားမူ စသည်. စသည် တို့ ကိုလေ့လာရင်း ကြည့်ရှုခံစားရင်း စတင်လည်ပတကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အပမ်းဖြေ လမ်းလျှောက်ရင်း အလှဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးနိူင်ရန် Brooklyn တံတား သို့ သွားရောက်လည်ပတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက် ညစာသုံးဆောင်ပြီး Hotel သို့ Check-In ၀င်ပြီး အပန်းဖြေ အနားယူကြမှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ီDay(3) – နယူးယောက် ( နံနက်/နေ့ လည်/ညနေစာ )
ံHotel တွင် နံနက်စာ စားပြီး New York မြို့ ရှိ - Wall Street , New York ကုန်သွယ်ေ၇း ဗဟို Exchange နင့် Charging Bull အပြင် World Trade Centre ပြိုကျခဲ့သောနေရာအား အမှတ်တရထိန်းသိမ်းသည့် Ground Zero နေ၇ာ,Rockefeller Plaza စသည့် နေ၇ာများကိုလည်ပတ်ပြီးနောက် အမေရိကန်တို့ ရဲ့ လွတ်လပ်မူ အထိမ်းအမှတ် တခုဖြစ်သော Liberty Statute ကို အပျော်စီး သင်္ဘောစီးဖြင့် နယူးယောက်မြို့ ကို ကွေုဝိုက်ဖြတ်သန်း စီးဆင်းနေတဲ့ မြစ်နဒီ Hudson River ဖြတ်သန်းလေညင်းခံရင်း နယူးယောက်မြို့ကြီးရဲ့ ခမ်းနားထည်ဝါမူကို ကြည့်ရှုခံစားရင်း Eliis Island ပေါ်မှာရှိတဲ့ Liberty ရုပ်ထုဆီကို သွားရောက်လည်ပတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်၊ တချိန်တည်းမှာဘဲ ကျွန်းပေါ်မှာ လှပဝေဆာပွ့င့်ဖူးနေတဲ့ ချယ်ရီပန်းတွေနဲ့ အတူ မိသားစုဆွေးမျိုးများ အပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းများနဲ့ တကွ တသက် မမေ့နိုင်စရာ အမှတ်တရဓါတ်ပုံများလည်း ရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ ပြီးနောက် ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦးအဖြစ် နှစ်ပေါင်း (၄၀) ကျော်ကြာအောင် စံချိန်တင်ခဲ့သော Empire State Building ၏ Observation Desk (၈၆) ထပ်မှ နေပြီး နယူးယောက်မြို့တစ်မြို့လုံးအလှကို Panorama View ကြည့်ရှု့ခံစာအပန်းဖြေပါမည်။ Metropolitan ပြတိုက် , နယူးယောက်မြို့၏ အစည်ကားဆုံး နေရာဖြစ်တဲ့Times Square တွင် လည်ပတ်ကြည့်ရှု့ရင်း အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံလှလှ ရိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်, (Optional 1)Madame Tussauds ဖယောင်းပြတိုက် ကိုဝင်ပြီး ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ လည်း ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ ဖျော်ဖြေမူ မျိုးစုံပြည့်နက်နေတဲ့ Time Square မှာတော့ လူကြီးမင်းများအတွက် ကြည့်ရှုစရာ စုံလင်စွာရှိတာမို့ City Life ကို ကောင်းကောင်းကြီးခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ နောက် Hotel သို့ပြန်ပြီး အနားယူ အိပ်စက်မှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Sweet Dream !
Day (4) –New Jersy နယူးဂျာစီ - ဖီလဲ့ဒဲဖီးယား-၀ါရှင်တန် ဒီစီ ( နံနက်/နေ့ လည်/ညနေစာ )
Hotel တွင် နံနက်စာစားပြီး New Jersey မှာရှိတဲ့ Princeton University သို့ စတင်လည်ပတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပြီးနောက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမိုင်းရဲ့ ပထမဆုံး ရုံးစိုက်ရာမြီု့တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မြို့ ၊ Democracy အစပြုရာ နေရာ၊ သမ္မတကြီး George Washington နေထိုင်ရာနေရာ၊ ပင်ဆီဗေးနီးယားပြည်နယ် Philadelphia မြို့တော်ရှိ လွတ်လပ်ရေး အဆောက်အအုံတွေ ၊ Liberty Bell နင့်အတူ ပထမဆုံး အကောင်းဆုံး Constitution ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ Old Capitol Building နင့် လွတ်လပ်ရေး ခန်းမ ဆီသို့ဆက်လက်သွားရောက် လေ့လာလည်ပတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ နေ့လည်စာ စားပြီးနောက် MaryLand မေရီလန်းပြည်နယ်ကို ဖြတ်ပြီး Washington DC မြို့တော်ကို ဆက်လက် ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပါတယ်။ WashingtonDC မြို့တော်ရောက်လျှင် (White House) အိမ်ဖြူတော်, ဂျက်ဖာဆန် အထိမ်းအမှတ်ရုပ်တု ၊ လင်ကွန်း အထိမ်းအမှတ်ရုပ်တု ၊ Vietnam War Memorial, Korean War Memorial Korean Veterans အထိမ်းမှတ်များ၊ ရို့ဆဲဘက်တ် အထိမ်းအမှတ် ရုပ်တု ၊ ၀ါရှင်တန် လွတ်လပ်ရေးအထိမ်းအမှတ် ကျောက်တိုင်အစရှိသည်တို့ပါဝင်မှာပဲ ဖြစ်ပါသည်။ အချိန်ရပါက သဘာဝသမိုင်းပြတိုက် ၊ လေကြောင်းနှင့် အာကာ သပြတိုက်များ အစရှိသည်တို့ကို သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းပြင် အချိန်ရပါက (Optional အဖြင့် ၀ါရှင်တန်မြို့ကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေတဲ့ Potomac ပိုတိုမက်မြစ် တလျှောက် အပျော်စီး သဘောင်္စီးရင်း ၀ါရှင်တန်မြို့ ရဲ့နေ၀င်ရီတရော ဆည်ဆာချိန်လေးကို ကြည့်ရှု့ခံစားရင်း အပန်းဖြေအနားယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်၊ ၄င်းနောက် ညစာသုံးဆောင်ပြီး Hotel တွင် အပန်းဖြေအိပ်စက် အနားယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
Day (5)- ၀ါရှင်တန် ဒီစီ-ဘတ်ဖဲလို - နိုက်အာဂါရာရေတံခွန် ( နံနက်/နေ့ လည်/ညနေစာ )
နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ်မှ ထွက်ခွာလာပြီး ရုပ်ရှင်ထဲများအတိုင်း Pensyvania ပြည်နယ် အကောင်းဆုံး Country Road များကို ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်ပြီး အမေရိကန် Country Songs ကို နားဆင်ရင်း နယူးယောက်ပြည်နယ် ကနေဒါ နယ်စပ်ရှိ Buffalo မြို့တော်ဆီသို့ထွက်ခွာလာမှာဖြစ်ပါတယ်၊ လမ်းတလျှောက်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင် စု၇ှိ လှပသာယာတဲ့ ရူခင်းအမျိုးမျိုးကိုလည်း ခံစားကြည့်ရှု့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ညနေဘက်မှာတော့ World Famous အံ့ဖွယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Niagara နိုက်အာဂါရာ ရေတံခွန်သို့သွားရောက်လည်ပတ်ကြည့်ရှုခံစားကြမှာဖြစ်ပါသည်။ ၄င်း Niagara Water Fall သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်ပြည်နယ်နဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံ Ontaria ပြည်နယ် ထိစပ်နေတဲ့ Niagara မြစ်နှစ်ဆင်းဆုံရာဖြစ်ပြီး တချိန်တည်းမှာဘဲ အမေရိကန် Water Fall၊ Canada Water Fall အပြင် Horseshoe Water Fall သုံးခုဆုံရာနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်လည်း ကမ္ဘာမှာ အသြဖွယ်ရာ တခုအပါ အ၀င်ဖြစ်ပြီး အလှပဆုံး စားရင်းဝင် ရေတခွန်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက် လူကြီးမင်းများ လာရောက်လည်ပတ်ရကျိုးနပ် မယ်ဆိုတာကိုတော့အသေအချာကိုပြောနိုင်ပါတယ်။ ညနေစာစားပြီးနောက်တွင် ဟိုတယ်သို့ Check in ၀င်ပြီး အိပ်စက်အနားယူမှာဖြစ်ပါတယ်။
Day (6) – ဘတ်ဖဲလို -နိုက်အာဂါရာရေတံခွန် - ဘော်စတွန် ( နံနက်/နေ့ လည်/ညနေစာ )
Hotel တွင် နံနက်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် ကမ္ဘကျော် Niagara ရေတံခွန်ရဲ့ အံ့မခန်းဖွယ် အလှအပကို လည်ပတ် ကြည့်ရှု့ပြီး အမှတ်တရ Group Photo များ ရိုက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်၊ ခရီးစဉ် - Imax သီရေတာတွင် ရုပ်ရှင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့ပြီးနောက် “Maid of the Mist “Cruise သဘောင်္စီးပြီးင်္ Niagara ရေတံခွန်ကို အနီးကပ်လေ့လာရင်း ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင်သွားရောက်ပြီး အမောအပန်းဖြေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းနောက် နေ့လယ်စာ သုံးဆောင်ပြီး Boston မြို့တော်သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာလာမှာဖြစ်ပါတယ်၊ ဟိုတယ်သို့ Check – in မ၀င်ခင်တွင် နာမည်ကျော် ဘော်စတွန် ပုစွန်တုပ်ကြီး ဖြင့် ညစာ သုံးဆောင်နိုင်ရန် ပို့ ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်၊ ၄င်းနောက် အိပ်စက်အနားယူရန် Hotel သို့ပို့ဆောင်ပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Day (7) – ဘော်စတွန် - နယူးယောက် ( နံနက်/နေ့ လည်/ ညနေစာ )
ဘော်စတွန်မြို့လည်ပတ်မည့် ခရီင်္းစဉ်တွင် နာမည်ကျော် ဟားဗတ်စ် Harvard University, M.I.T University တိုကို ၄င်းသွားရောက်လည်ပတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းနောက် ဘော်စတွန်မြို့ ကို ကွေ့ ဝိုက် စီးဆင်းနေတဲ့ Charles မြစ် ပေါ်တွင် အပျော်စီးသင်္ဘောစီးပြီး ဘော်စတွန်မြို့ ၏ အလှအပကိုခံစားကြည့်ရှုပြီး စိတ်အေးချမ်းသာစွာ အနားယူ အပန်းဖြေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ ပြင် အစားအသောက်နင့် အမှတ်တရပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူနိင်သည့် Qunicy Market အစရှိသည်တို့ ကိုလညပို့ ဆောင်ပေးအုန်းမှာဖြစ်ပါတယ် ။ နေ့လည်ခင်းတွင် ဘော်စတွန်မြို့ ရှိလှပသာယာသော City Hall နှင့် လှပသာယာသော အခြားနာမည်ကြီးနေရာများကိုလည်း သွားရောက်လည်ပတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်၊ ပြီးနောက် နယူးယောက်မြို့ ကိုပြန်လည်ထွက်ခွါပါမည်။
Day (8) –နယူးယောက် ( နံနက်/နေ့ လည်/ညနေစာ )
Hotel တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် အမေရိကားမှာ အကြီးဆုံးနဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ ရှေးဟောင်းအနုပညာ ပစ္စည်းများ Moderm Act ပေါင်းစုံတို့ စုဝေးတည်ရှိနေတဲ့ နာမည်ကျော် Metropolitan Museum ကို သွားရောက် လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ် ၄င်းနောက် New York မြို့ကြီးရဲ့ကျက်သရေဆောင် Landmark တခုဖြစ်တဲ့ Manhattan ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ ဧကပေါင်းတစ်ထောင်နီးပါးကျယ်ဝန်းပြီး၊ စိမ်းလဲ့ကြည်လင်နေသောရေကန်နဲ့အတူ အင်မတန်လှပ သာယာသော Central Park မှာ လမ်းလျှောက်လေညင်းခံရင်း New Yorkers နယူးယောက် မြို့သူမြို့သားများရဲ့ နေ့စဉ် အပန်းဖြေ နေထိုင်မူပုံစံကို လေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့လည်စာစားပြီးနောက် အမှတ်တရ အနေဖြင့် UN Head Quarter သို့ လေ့လာရေးသွားရောက်ပြီး အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်ကြမှာပါ ၄င်းနောက် 5th Avenue , Rockefeller Center များတွင် Shoopping လုပ်ရင်း မိမိတို့စိတ်ကြိုက် Branded များနဲ့ အမှတ်တရ ပစ္စည်း များ ၀ယ်ယူနိ်ုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းနောက် ညစာသုံးဆောင်ပြီး နယူးယောက် မြို့ရှိ Hotel တွင် အိပ်စက် အနားယူကြ မှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Day (09) နယူးယောက်- ဟောင်ကောင် ( သို့ မဟုတ် ) ဒူဘိုင်းမြို့( နံနက်စာ ) Meals of flight
မနက်ခင်းတွင် Shopping Center များတွင် အမှတ်တရပစ္စည်းများလက်ဆောင်ပေးရန် ဈေးဝယ်ထွက်ပြီး John F Kennedy International airport မှတဆင့် On Flight / နယူးယောက်မြို့ မှတဆင့် ရန်ကုန်မြို့သို့Five stars airline ကြီးဖြင့် ပျံသန်းထွက်ခွာပါမည်။
Day (10) ဟောင်ကောင်လေဆိပ် (သို )့ ဒူဘိုင်းလေဆိပ် - ရန်ကုန် ( Meals on flight )
ဟောင်ကောင် ( သို့မဟုတ် ) ဒူဘိုင်း လေဆိပ်မှတဆင့် ရန်ကုန်မြို့ သို့ ပျော်ရွင်ချမ်းမြေစွာ ချောချောမောမော အမိမြေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Home Sweet Home
Remark- Tour itinerary is subjected to changeabit without prior notice owing to car traffic Jam, unavoidable matters such as bad weather and other governmental management orders.
ခရီးစဉ်တွင် ပါဝင်သော ၀န်ဆောင်မှုများ
*** ဗီဇာ လျှောက်ထားပေးခြင်း(No visa fees)
*** ပြည်တွင်း/ပြည်ပ လေယာဉ်လက်မှတ်များ(Cathay Pacific or Emirates Airways/ American Airlines)
***4Stars/3Stars ဟိုတယ်များတွင် တည်းခိုခြင့း်(ံHilton, Adam Mark, Majestic, Excalibur Hotel,etc)
*** ကုန်းတွင်းခရီး ပို့ဆောင်ပေးခြင်း (ကား ၊ ရထား ၊ ဘတ်စ်ကား)
*** မြန်မာ Tour Leader တဦး
*** အင်္ဂလိပ်စကားပြော ဧည့်လမ်းညွှန်
*** ခရီးစဉ် တွင်ပါဝင်သော ဂိတ်ဝင်ကြေးများ
*** နံနက်/နေ့ လည်/ညနေစာများ
ခရီိးစဉ်တွင် မပါဝင်သော ၀န်ဆောင်မှုများ
*** ဗီဇာကြေး နှင့် ကားဆရာ နှင့် ဧည့်လမ်းညွှန် ဆုကြေးငွေများ
*** San Francisco in-Depth City Tour
*** ခရီးစဉ် တွင် ဖော်ပြမထားသော ဂိတ်ဝင်ကြေးများ
*** အခြားသော အဖျော်ယမကာနှင့် Harddrinks များ
မှတ်ချက် --- ဧည့်သည်များမှ နေ့ လည်စာ နှင့် ညနေစာ ကို မယူပါကဈေးနှုန်း သည် ( ၂၆၅၀ ) USD ကျသင့်ပါမည်။